လက်ကား Red Translucent Acrylic Sheet (0.6mm-10mm) ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ထုတ်လုပ်သူ |ရိုးသားဖြူစင်သည်။
အနီရောင် Translucent Acrylic Sheet (0.6mm-10mm)
Extruded acrylic sheet ကိုလည်း plexiglass သို့မဟုတ် pmma board ဟုခေါ်သည်။ စျေးသက်သာပြီး ယေဘူယျသုံးသော ပလပ်စတစ်စာရွက်အနေဖြင့်၊ ရောင်စုံ acrylic sheet သည် ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ရိုက်ခတ်မှုပိုမိုခံနိုင်ရည်တို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်သောဖန်၏ဖန်တီးမှုရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
●ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော acrylic စာရွက်သည် optical-level ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုပေးဆောင်ပြီး 92% ကျော်အလင်းပို့လွှတ်မှုနှင့်အတူ၊
●ထက်ဝက်ကျော်သော သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသော ဖန်အလေးချိန်ထက်ဝက်
●ကော်နှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် လွယ်ကူသည်။
●အရွယ်အစား သို့မဟုတ် ပုံစံများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဖြတ်ပါ။
●စာရွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မာကျောသော coated သို့မဟုတ် electroplated အတွက် ရနိုင်သည်။
အကြည် acrylic စာရွက်
ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး ဤစာရွက်များသည် ကောင်းမွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီး သဘာဝတွင် သာမိုပလတ်စတစ်ဖြစ်သည်။၎င်းသည် ၎င်းတို့ကို ပုံသွင်းခြင်း၊ ပုံဖော်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုရန်အတွက် အမျိုးမျိုးသော ပုံသဏ္ဍာန်များကို ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။အခြားသော စိတ်ကြိုက်အရောင်နှင့် ပုံစံများကိုလည်း ပြုလုပ်ရလွယ်ကူပါသည်။ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော acrylic စာရွက်များသည် အနုပညာ တပ်ဆင်မှု၊ အပြင်ဘက် ဆိုင်းဘုတ်များ၊ အကာအရံများ၊ လေယာဉ်ခေါင်မိုးများ၊ မိုးကောင်းကင်များ၊ မော်တော်ယာဥ် နောက်မီးများ၊ ဒိုင်ခွက်များ၊ ခလုတ်များ၊ အလင်းအသုံးအဆောင်များ၊ ခလုတ်များ၊ နှင့် စက်ကာဗာများ အပါအဝင် နေရာတိုင်းနီးပါးတွင် ၎င်းတို့ကို မြင်တွေ့နိုင်သည် ။ဆယ်နှစ်ကျော် 'ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်ရေး အတွေ့အကြုံ။
ပစ္စည်း နာမည် မြင့်မားသောအကြည် acrylic စာရွက်
အမှတ်တံဆိပ် နာမည် အံ့သြဖွယ်
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ 100% ကုန်ကြမ်း PMMA plexiglass
ရရှိနိုင်သောအရွယ်အစားများ 1220*2440mm(4*8ပေ)၊ 1220*1830mm(4*6ပေ)၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်
MOQ (အနည်းဆုံး မှာယူမှုအရေအတွက်) 500KG
ဖုံးကွယ်ထားသည်။ PE ဖလင် သို့မဟုတ် ဖန်ထည် ဖလင်
လျှောက်လွှာ 1 အဆောက်အဦအလှဆင်ပရိဘောဂပစ္စည်းများအမျိုးမျိုး
တံခါး ၃ ပေါက်၊ ပြတင်းပေါက်များ၊ မီးခုံများနှင့် ကော်ဖတ်အမိုးအကာများ
4 စက်အဖုံး၊ လျှပ်စစ်ပေတံ၊ လျှပ်ကာပစ္စည်း
01/နှစ်သက်ရာ အပျိုစင်ပစ္စည်းများ၊ အရည်အသွေးအာမခံချက်
ပစ္စည်းအသစ်များဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုကို အာမခံပါသည်။
ကောင်းသောအလင်းပို့လွှတ်မှုနှင့်အတူအရည်အသွေးအာမခံ panel ကို
ကြွပ်ဆတ်ပြီး တာရှည်ခံဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။
02/ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မြင့်မားခြင်း။
96% ကျော် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု
အညစ်အကြေးမရှိသလို အဝါရောင်လည်း မရှိပါဘူး။
03/အထူ အမျိုးမျိုး ရနိုင်ပါသည်။
လှီးဖြတ်ထားသော မျက်နှာပြင်သည် မျက်နှာပြင်ကို ချောမွေ့စေသည့် စိန်ပွတ်နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည်။
1. စိတ်ကြိုက်အမြောက်အများရှိသော acrylic plate ၏ အနည်းဆုံး မှာယူမှုပမာဏမှာ အဘယ်နည်း။
အဖြေ- ဟုတ်ကဲ့၊ ယေဘုယျ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ဘုတ် moQ 1 တန်၊ အရောင်မှန်ဘုတ် moQ2တန်။သင်၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့် လက်ရာကို ကြည့်ရှုရန် မည်မျှ အပိုင်းပိုင်းကို အတိအကျ ဆုံးဖြတ်ပါ။
A: ယေဘူယျအားဖြင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော၊ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသောပန်းကန်သည် 10-15 ရက်လိုအပ်သည်၊ မှန်ပြားသည် စက်ရုံ၏အမိန့်ပေါ်မူတည်၍ 25-30 ရက်လိုအပ်သည်။
3. Acrylic စာရွက်နမူနာများကို ပေးနိုင်ပါသလား။
အဖြေ- ဟုတ်ကဲ့၊ ယေဘူယျအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာများသည် A4 အရွယ်အစားဖြစ်ပြီး ဖောက်သည်များအတွက် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခ ကောက်ခံပါသည်။ဖောက်သည်သည် နမူနာအတွက် အခြားလိုအပ်ချက်များရှိပါက၊ လိုအပ်ချက်များအရ အချို့သော နမူနာအခကြေးငွေကို ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ခံပါမည်။
ယခင်- ကြည်လင်သော Acrylic Mirror Sheet (0.6mm-10mm)
နောက်တစ်ခု: အပြာရောင် Translucent Acrylic Sheet (0.6mm-10mm)
Anti-Blue light acrylic စာရွက်
စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော acrylic ပန်းကန်
အပြာရောင် Translucent Acrylic Sheet (0.6mm-10mm)
ခရမ်းရောင် Extruded Transparent Acrylic စာရွက်
Ir filter IR permeable Infrared Windows PMMA pl ...
ပန်းရောင်ဖောက်ထွင်းထားသော Acrylic စာရွက်